Wiricheya Kudhonza kuruboshwe kana kurudyi
Kana iwe ukaona kuti yako wiricheya iri kudhonza kurudyi kana kuruboshwe, panogona kunge paine chakakanganisika nechinhu chinoda kubviswa.
Chinhu chiri pachena kutarisa kana chigaro chiri kudhonza kune ese mativi ndechekuti vhiri rekumashure rinotenderedzwa uye rakatwasuka uye risina kukotama izvo zvinoita kuti sachigaro udhonze kune rimwe divi. Iwe unogona zvakare kutarisa kumanikidzwa kwetaya uye kana iro rimu rakasununguka kuti uone kuti nei chigaro chiri kuenda kune rimwe divi.
Zvimwe Zvikonzero zveBalance Matambudziko
Imwe nzira yekuchengetera kuti uone kana mavhiri ekumashure akakombama ndeye kana iwe uchimhanyisa kuburitsa mavhiri iwe unogona kunyatso shandura marimu kubva kune rimwe divi kuenda kune rimwe, kuti uone kana cheya ichiri kudhonza kuenda kudivi rimwe chete kana kuti kudhonza kuri kune divi rakatarisana. Kana paine chero chinhu ichi chingabvisa mavhiri ekumashure ari iwo nyaya, zvinova zvakajairika sechikonzero chedambudziko iri.
Imwe nyaya yakakomba ingave kana iwe ukaona kuti yako wiricheya furemu yakakombama. Kana zvirizvo, iwe unofanirwa kubata yemuno wiricheya kana bhasikoro shopu kuti vaone kana ivo vachikwanisa kutwasanudza furemu. Kana izvi zvisiri izvo, kubheja kwakanakisa kungave kwekubata mugadziri kuti uone kana paine chavanogona kuita kubatsira nyaya yako.